Wararka - [Alaab cusub] FT3, FT4
[Alaab cusub] FT3, FT4
FT3 iyo FT4 waa soo gaabinta Ingiriisiga ee serum free triiodothyronine iyo serum free thyroxine, siday u kala horreeyaan.
FT3 iyo FT4 waa calaamadaha ugu xasaasisan ee lagu ogaanayo hyperthyroidism.
Sababtoo ah maadooyinkooda ma saameynayaan qanjirka thyroid-ka ee globulin, waxay leeyihiin qiimaha codsiga muhiimka ah ee ogaanshaha hyperthyroidism iyo hypothyroidism, qiimeynta darnaanta cudurka, iyo la socodka saameynta daaweynta.
Go'aaminta serum ama heerarka plasma ee Triiodothyronine (T3) ayaa loo aqoonsan yahay inay tahay cabbir muhiim ah oo lagu qiimeeyo shaqada tayroodh.Saamaynta ay ku leedahay unugyada la beegsanayo ayaa qiyaas ahaan afar jeer ka xoog badan kuwa T4.Free T3 (FT3) waa qaabka aan xidhnayn oo bayooloji ahaan firfircoon, kaas oo ka dhigan 0.2-0.4 % oo keliya wadarta T3.
Go'aaminta T3 bilaashka ah ayaa faa'iido u leh in ay ka madax bannaanaato isbeddellada isku-darka iyo sifooyinka xirmooyinka borotiinnada;Sidaa darteed T3 bilaashka ah waa qalab waxtar leh oo ku saabsan ogaanshaha joogtada ah ee bukaan-socodka ee qiimeynta xaaladda thyroid.Qiyaasta T3 ee bilaashka ah waxay taageertaa ogaanshaha kala duwanaanshaha cilladaha tayroodh, waxaa loo baahan yahay si loo kala saaro noocyada kala duwan ee hyperthyroidism, iyo in la aqoonsado bukaannada qaba T3 thyrotoxicosis.
Go'aaminta serum ama heerarka plasma ee Thyroxine (T4) ayaa loo aqoonsan yahay inay tahay cabbir muhiim ah oo lagu qiimeeyo shaqada tayroodh.Thyroxine (T4) waa mid ka mid ah laba hormoon oo waaweyn oo uu soo saaro qanjidhada tayroodh (ka kale waxaa loo yaqaan triiodothyronine, ama T3), T4 iyo T3 waxaa nidaamiya habka jawaab celinta xasaasiga ah ee ku lug leh hypothalamus iyo qanjirka pituitary.
T4 lacag la'aana waxaa lala cabbiraa TSH marka laga shakiyo cilladaha shaqada tayroodh.Go'aaminta fT4 waxay sidoo kale ku habboon tahay la socodka daaweynta thyrosuppressive. Go'aaminta T4 ee bilaashka ah ayaa faa'iido u leh inay ka madax bannaanaato isbeddellada fiirsashada iyo sifooyinka isku-xidhka borotiinnada;
Waxa ku jira FT3 ayaa muhiimad weyn u leh ogaanshaha kala duwanaanshaha in shaqada tayroodh caadi tahay, hyperthyroid ama hypothyroid.Aad bay ugu nugul tahay ogaanshaha hyperthyroidism waana tilmaame gaar ah oo loogu talagalay ogaanshaha T3 hyperthyroidism.
Go'aaminta FT4 waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ogaanshaha joogtada ah ee kiliinikada waxaana loo isticmaali karaa habka la socodka daaweynta xakamaynta tayroodhka.Marka la tuhmo cillad la'aanta tayroodh, FT4 iyo TSH ayaa inta badan la cabbiraa.